Apk ဝေမျှမယ် Bluetooth ကို Download လုပ်ပါ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » apk ဝေမျှမယ်ဘလူးတုသ် - စီမံခန့်ခွဲရန် / / Backup ကို / Uninstall ကို Send
apk ဝေမျှမယ်ဘလူးတုသ် - APK ကိုစီမံခန့်ခွဲရန် / / Backup ကို / Uninstall ကို Send
✰✰apk ဝေမျှမယ်ဘလူးတုသ်✰✰ - ကူညီပေးသည်တဲ့ app ကိုမန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ် Share , Uninstall ကို , Backup ကို နှင့် စီမံခန့်ခွဲရန်.apk SHARER - apk / Link ကိုပို့ပါ
ဒီ app ကိုအသုံးပြုခြင်းသငျသညျခွငျးအားဖွငျ့ကိုအလွယ်တကူ apk သို့မဟုတ် play စတိုး link ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်:
⚡ NFC ကိုနှင့်စသည်တို့ကို
၎င်းသည်သင်လွှဲပြောင်း app ကိုအရွယ်အစားအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးသည်။
လွယ်ကူသော Uninstaller - အကွိမျမြားစှာလျင်မြန်စွာ Uninstaller
App ကိုတွေ့ပါရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည် နောက်ဆုံး installed, ပိုပြီးအရွယ်အစား application များနှင့်တဦးတည်းကလစ်အတွက်အလွယ်တကူပြုလုပ် Uninstall ။ သင်တို့သည်လည်းစနစ်က apps များစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပေမယ့်အမြစ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအဲဒါကို uninstall မဖြစ်နိုင်ပါပါပဲ။
App ကို Backup ကို - အလွယ်ဆုံး backup လုပ်ထား tool ကို
SD ကဒ်မှ bulk Apk Backup ကို။ သင့်ရဲ့ device ကိုသိုလှောင်မှု UP အခမဲ့! ပိုမိုမြန်ဆန် & သေး။
✓အကွိမျမြားစှာ Apk ဝေမျှမယ် - လွှဲပြောင်း apps များဘလူးတုသ်ကျော်, အီးမေးလ်, Facebook က, Whatsapp စသည်တို့ကို
✓အကွိမျမြားစှာ App ကို Uninstall ကို - လြယ္ကူ Uninstall ကိုမျိုးစုံ app ကိုပိုမြန်တဦးတည်းကလစ်ပါ။ အစာရှောင်ခြင်း apk ဖယ်ရှားမှုကို။
✓အကွိမျမြားစှာက App Backup ကို - တဦးတည်းကလစ်အတွက် SD ကဒ်မှမျိုးစုံ apk Save ။
Clipboard မှ✓ Copy ကူးမျိုးစုံ app ကို Link ကို
✓အော်တို Apk မွမ်းမံ - install အသစ်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရန်အပေါ် App ကိုစာရင်းလန်းဆန်း
✓လျင်မြန်စွာစီ - အမည်အားဖြင့်စီ, နေ့စွဲ Install, Size ကို
Play Store ကိုအပေါ်ကြည့်ရန် App ကို✓
✓ Launch Selected လျှောက်လွှာ
✓ပြရန် System ကိုအသုံးပြုခြင်း
✓ Sweet & အသုံးဝင်မှု interface ကို
✓လျင်မြန်စွာရှာရန် - နာမတော်ဖြင့်အလွယ်တကူသင့်လျှောက်လွှာရှာရန်
✓ App ကို Information - သင့်ရှာဖွေရေး filter ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးရှိုးများကိုရှေးခယျြအပေါင်းတို့နှင့်တကွလျှောက်လွှာအရေအတွက်နှင့်အရွယ်အစား
✓အသုံးပြုခွင့်ပြုချက်များ - App ကရှိုးပွဲများကိုအသုံးပြုခွင့်ပြုချက်
အမြစ်ခွင့်ပြုချက်တည်ရှိမပါဘူးဆိုရင်သင်က system ကိုလျှောက်လွှာကို uninstall လုပ်လိုက်လို့မရပါဘူး»။
သငျသညျစာရင်းတွင် app ကိုမြင်နေကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်»သုံးစွဲဖို့ကြိုးစားကြ System ကို Apps ကပပြရန် option ကို။
→ WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Backup ကို Apk သည် SD ကဒ်မှ
💬အဘယ်ကြောင့်ငါစာရင်းတွင်အချို့ apk ကိုမမွငျ?
စနစ်က app ကို💡Forသင် menu က "Show ကိုစနစ် Apps ကပ" စစျဆေး
💬ငါမဟုတ်တဲ့ Android ထုတ်ကုန်မှ Apk Share နိုင်သလား?
💡Yesမဟုတ်သောဟာ android devices များဘလူးတုသ်, အီးမေးလ်နှင့်စသည်တို့ကိုရှိပြီးတော့သင်ပို့နိုင်ပါသည်, သို့သော်သင်မဟုတ်တဲ့ Android device ကိုအပေါ် apk ကို run လို့မရဘူးဆိုပါက
💬နှစ်ဦးစလုံးကြောင့်လူ app ကိုလိုအပ်ပါသလား?
💡Noသာပေးပို့သူဒီ app လိုအပ်ပါတယ်
💬အဘယ်သို့ငါ SD ကဒ်မှ backup လုပ်ထားအားလုံး app ကိုတတ်နိုင်သမျှ?
💡From menu က "အားလုံးကို Select လုပ်ပါ" ကိုနှိပ်ပါ "Backup ကို" ကိုရွေးချယ်ပါ
💬အဘယ်သို့ငါပိုပြီးအရွယ်အစား applications များရှာတွေ့နိုင်မလဲ
အရွယ်အစားအားဖြင့်💡Useစီ။ သင်လုပ်နိုင်သည် ပြောင်းလဲမှုမျိုးဦးတည်ချက် နှစ်ကြိမ်အတွက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
💬အဘယ်သို့ငါမကြာသေးမီ installed applications များရှာတွေ့နိုင်မလဲ
သင်သာဒေါင်းလုတ်လုပ် applications များဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်ဒီ apk ဖယ်ရှားမှုကို💡Using။ System ကို app ကိုဖြုတ်လို့မရပါ။ သငျသညျအမြစ်ခွင့်ပြုချက်ရှိလြှငျမူကား, သငျသညျဖယ်ရှားရန်ခလုတ်ကိုသုံးပြီးအလွယ်တကူ apk ကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
အခြို့သော device များအတွက်✓ Fixed ချို့ယွင်းမှုများ
✓ Added သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ
apk ဝေမျှမယ်ဘလူးတုသ် - စီမံခန့်ခွဲရန် / / Backup ကို / Uninstall ကို Send
ဝေမျှမယ် Apps ကပ